Xildhibaan Jindi: Sax maaha in Xeer kulkankii ugu horeeyey ee looga dooday lagu ansixiyo – Kalfadhi
Xildhibaan Jindi: Sax maaha in Xeer kulkankii ugu horeeyey ee looga dooday lagu ansixiyo
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi ayaa u sheegay Kalfadhi in ay Xukumadda Soomaaliya dooneyso in kulanka Golaha Shacabka ee maanta ay uga ansaxsato wax-ka-beddel ay dooneyso in lagu sameeyo Xeerka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Arrintaas ayuu Xildhibaanku ku tilmaamay sharci darro. “sharciyan sax maahan in xeer Golaha Shacabka lagu hor keeno kulan, isla kulankaasna lagu meel mariyo” ayuu yiri Xildhibaan Jindi. “Laakiin sharci darro iyo qar iska tuurnimo ayey wadaan” ayuu Jindi hadalkiisa sii raaciyey.
Sida uu ku doodayo Xildhibaanku waxa ay xukumaddu dooneysa in Xeerka Bangiga Dhexe laga bedelo qodobbada sheegaya in maamulka bangigaas ay gacanta ku hayn karaan dad Soomaaliyeed oo kaliya. “Xukumaddu waxay dooneysaa” buu yiri “in ajanabi loo dhiibi karo maamulka Bangiga Dhexe”. Waxa uu yiri “Waxaa la doonayaa in Xeerka Bangiga Dhexe lagu daro qodob ah in ay madax ka noqon karaan dad aan Soomaali ahayn”.
Hase ahaatee, waxa uu Xildhibaanku sheegay iney maqleen inuu Madaxweyne Farmaajo diidan yahay damaca xukumadda ee ah in xeerkaas la fara-geliyo hadda ama ajnabi loo gacan-geliyo maamulka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. “Waxaan maqalnay in Madaxweynuhu uu diidan yahay in Bangiga Dhexe loo Magacaabo shaqsi aan Soomaali ahayn” ayuu Xildhibaan Jindi ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa war uu maalin ka hor soo dhigay Feysbuuggiisa waxa uu uga hadlay dib-u-eegistaas ay Xukumaddu dooneyso inuu Baarlamaanku wax uga beddelo Xeerka Bangiga Dhexe. Waxa uu rabitaanka xukumadda ugu yeeray “Beec Geynta Bangiga Dhexe”. Intaas waxa uu raaciyey ineysan gareyn meesha au arrintaas ku biya-shuban doonto. Xildhibaanku waxa uu isweydiiyey iney dowladdu weysay qof Soomaaliyeed oo ay ku aaminto shaqadaas, sida hoose ayuuna isa-su’aalay:-
1) Maxaa xikmad ah oo kujira in xiligaan shuruucda dalka loo badalo nin ajnabi ah, si loogu dhiibo Bankiga Dhaxe, oo ah hay’adda ugu saraysa ee maamusha dhaqaalaha dalka?
2) Maxaa looga cararayaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka wadaniga ah, laguna doortay nin ajnabi ah, oo cilmi maaliyadeed aan baran, shaqo maaliyadeedna aan soo qaban, sida CV-giisa ka muuqata?
3) Mise waxaa jira qorsheyaal kale, oo naga qarsoon oo in aan ogaanana hadda aysan muhiim ahayn?!
Golaha Shacabka oo markii ugu horeysay kulmaya sanadkan cusub ee 2019-ka
Sanatar Nadiir: Rabshadihii ka dhacay Baydhaba cadaw ayaa ka dambeeyey